PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - Uphinde wahlabana umnyango wezindlu eKZN
Uphinde wahlabana umnyango wezindlu eKZN
Isolezwe - 2017-11-13 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
UNGQONGQOSHE wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi KwaZuluNatal uthe ubengakulindele ukuthi umnyango wakhe uphinde uchonywe uphaphe lwegwalagwala ngokuhamba phambili ekunikweni kwabantu izindlu.
UMnuz Ravigasen Pillay, ukusho lokhu ngemuva kokuthi isifundazwe siphinde sathola indondo okungeyesine iminyaka ilandelana kumaGovan Mbeki Awards abeseGallagher Convention Centre, eMidrand ngoLwesine.
UMnyango weziNdlu esifundazweni umuke nezinye izindondo ezine kule miklomelo waphinde walala isibili kweminye iminxa emibili.
Umenyezelwe njengowenza kahle kulo nyaka u-2017 kanti bese ukuphinda okwesine njengoba ngo-2016, 2015 nango2014 wamenyezelwa njengowenza kahle uma kubhekwa ukunikwa kwabantu izindlu.
Kulo nyaka uhlabene ngokubambisana nesifundazwe iWestern Cape naso esichonywe uphaphe lwegwalagwala ngokwenza kahle ekunikweni kwabantu izindlu.
UMasipala waseNewcastle nawo ubuye nendondo okuyiBest Level 2 Accredited Municipaltiy.
UMasipala weTheku wona umenyezelwe njengeBest Metropolitan Municipality.
ULizeka Prudence Dada wakulesi sifundazwe uchonywe uphaphe lwegwalagwala ngokwenza kahle ezifundweni zakhe ezixhaswe yilo mnyango enyuvesi ngokuthola oDistinction abangu-21 nokwenza kahle ezifundweni zakhe kuzwelonke.
Umnyango uphinde wathola indondo ngokuba semunxeni weBest Rental Housing Tribunal kanti ulale isibili koweBest Social Housing Project ngohlelo lukaMasipala waseMsunduzi i-Aloe Ridge Westgate-Grange Social Housing Project.
Ubuye walala isibili kwiBest Non-Subsidy Category okunqobe kuyo iNtokozweni Developers.
UPillay uthe umsebenzi wokuhlaliswa kwabantu udinga ukubambisana nezinhlaka ezehlukene.
“Kumqoka ukusebenza nezinye izinhlaka okubalwa omasipala okuyibo abasekhaleni ekunikeni abantu izindlu nokusebenza nabaholi bendabuko,” kusho uPillay.
Uthe kumele bathole ezinye izindlela zokulekelela abantu abasahlala emijondolo okungenzeka bangazitholi izindlu zabo eminyakeni emihlanu ezayo.
Ngemiklomelo kuhloswe ukuhlonipha omasipala nosonkontileka abawenza kahle umsebenzi wokunika abantu izindlu kanti iminyango yezifundazwe incintisana kweminye iminxa okubalwa kuyo oweBest Rural Housing Project, MEC’s Best Merit Award neminye.
UPHINDE wachonywa uphaphe lwegwalagwala okwesine iminyaka ilandelana uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natal oholwa nguNgqongqoshe uMnuz Ravi Pillay. Uyiqwaqwade yonke ezweni kumaGovan Mbeki Awards emcimbini...